Gravity (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး ~ ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
ဖုန်း ကွန်ပျူတာနည်းပညာနှင် မြန်မာစာတန်းထိုးရုပ်ရှင်များမျှဝေရာ
Backup Restore လုပ်နည်း (2)
complete season (16)
Firmware တင်နည်းများ (11)
Ip Man (5)
Mobile knowledge (1)
my apk (9)
Photo Slideshow (5)
Prison Break (83)
Prison Break Season (5)
Prison Break Season 1 complete (1)
Prison Break Season2complete (1)
Prison Break Season3complete (1)
Prison Break Season4complete (1)
Prison Break The Final Break မြန်မာစာတန်းထိုး (1)
The Transporter (4)
မြန်မာစာတန်းထိုး တရုပ်သိုင်းကား (43)
မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် (684)
Gravity (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
7:42:00 AM မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် 1 comment
မကြိုက်တဲ့ သူတွေက ဘာလို့ မကြိုက်ကြလည်းတော့မသိဘူး။
အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံးကားတွေထဲမှာ ဒီကားလည်းပါပါတယ်။
တစ်ချိန်က နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Godfather ဇာတ်လမ်းတွေ၊
Nolan ရဲ့ The Dark Knight ၃ကားနဲ့ တန်းတူ အောင်မြင်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ကားပါ။ အခုထဲကတောင် Oscar Nomination မှာ ထိပ်ဆုံးက စာရင်းပြေးနေပါပြီ။
Best Actress, Best Achievement in Visual Effect, Best Writing, Director, စတဲ့ ဆုတွေအတွက် ဆန်ကာတင်စာရင်းမှာ ပါဝင်ဖို့လည်း ကြိမ်းသေနေပါတယ်။ ဒီကားကိုကြည့်ရင်းနဲ့ မြန်မာပြည်ကိုတောင် ပြန်သတိရမိပါတယ်။
အမေရိကားနိုင်ငံမှာ လူကြိုက်များရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းကတော့ Cold War (1947-1991) အမေရိက နဲ့ ရုရှားတို့ စစ်အေးတိုက်ပွဲကာလ (ကုလသမဂ္ဂဥက္ကဌ ဦးသန့် ဖြေရှင်းပေးခဲ့ရတဲ့ Cuban Missile Crises, ref: http://www.unspecial.org/UNS680/t23.html) ) ကာလတုန်းက သူတို့ နှစ်နိုင်ငံက စစ်ရေးတင်မကပဲ အာကာသ ကို လူလွှတ်နိုင် ဖို့၊ ဂြိုလ်ထုတွေ လွှတ်တင်နိုင်ဖို့ကိုပါ ပြိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဲ့ဒီ ကစလို့ အမေရိကန်လူမျိုးတွေက အာကာသကို သွားဖို့က သူတို့ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အိမ်မက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
(မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ၁၀တန်းပြီးရင် ဆေးကျောင်းတက်ရမယ် ဆိုသလို၊
အမေရိကား မှာလည်း လူငယ်တော်တော်များများက အာကာသကိုသွားတဲ့ Astronaut ဖြစ်ချင်ခဲ့ ကြပါတယ်။ ဖြစ်ဖို့လည်း မလွယ်ပါဘူး။)
ဒါကြောင့်လည်း ဒီကားက အမေရိကား မှာ လူကြိုက်များနာမည်ကြီးပြီး
ဒီကားက Action, Drama, Thriller အစရှိတဲ့ ရသပေါင်းစုံခံစား နိုင်အောင် ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပြီး အာကာသထဲက စွန့်စားခန်းတွေကို
ပရိတ်သတ်တွေ ရင်သက်ရှုမော ခံစားနိုင်အောင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားရဲ့ ဆောင်ပုဒ် က Life in Space is impossible ဆိုတဲ့အတိုင်း အာကာသ ထဲက လူတွေရဲ့ဘ၀ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
အာကာသထဲကို သွားရင် အမြဲတမ်း အာကာသယာဉ်မောင်း ပိုင်းလော့ ၂ယောက် (အမေရိကန်လေတပ် က အရာရှိတွေကိုပဲ ပိုင်းလော့ခန့်ပါတယ်)။
ပညာရှင် ၂ယောက်၊ ယေဘူယျအားဖြင့် ပါလေ့ရှိပါတယ်။
ဇာတ်လမ်း ကတော့ George Clooney က Pilot ဖြစ်ပြီး ဒီ Mission ရဲ့ ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Sandra Bullock ကတော့ ဂြိုလ်ထုကို ပြင်ဖို့ လိုက်ပါလာတဲ့ ပညာရှင်တွေထဲက တစ်ယောက်ပါ။ သူတို့က အာကာသထဲမှာ ရောက်နေတာ ၁ပတ်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ဂြိုလ်ထုကို ပြင်လို့မရသေးပါဘူး။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ရုရှားက Cold War အတွင်းက လွှတ်တင်ထားတဲ့ ဂြိုလ်ထုဟောင်းတစ်လုံးကို ဒုံးကျည်နဲ့ ဖျက်ဆီးလိုက်ရာကနေ ဂြိုလ်ထုအပိုင်းအစ တွေက ဂြိုလ်ပတ်လမ်း ထဲမှာ လွင့်နေပြီး ရှိသမျှ အရာ တွေကို ပျက်ဆီးစေတာကြောင့် သူတို့ရဲ့ Mission ကို ရပ်ပြီး ပြန်လာဖို့ ကမ္ဘာပေါ်က ဌာနချုပ် Houston (အမေရိကန်နိုင်ငံ တက္ကဆက်စ် ရှိ အာကာသ စခန်း) က အမိန့်ပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ဂြိုလ်ထု အပိုင်းအစတွေ ထိမှန်ပြီး သူတို့ရဲ့ အာကာသယဉ်လည်း ပျက်ဆီးသွားသလို George Clooney နဲ့ Sandra Bullock တို့ပဲ အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ Sandra Bullock အာကာသထဲမှာ မျောသွားတာကို George Clooney က လိုက်ကယ်ရမှာဖြစ်ပြီး အနီးနားမှာ မပျက်ဆီးပဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ ရုရှား နဲ့ တရုတ် တို့ရဲ့ အာကာသ စခန်းကနေ သူတို့ရဲ့ အရေးပေါ် ကမ္ဘာကိုပြန်ဆင်းတဲ့ ယဉ်ပျံနဲ့ ပြန်ဆင်းဖို့ ကြိုးစားရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အာကာသ ထဲမှာ မျောနေတာက ကမ်းမမြင် လမ်းမမြင်နဲ့ ပင်လယ်ထဲမှာမျောနေရသလိုပါပဲ။ ပိုဆိုးတာက အာကာသက လေဟာနယ်ဆိုတော့ ရေကူးသလိုမျိုးတောင် ကိုယ်လိုရာကို သွားလို့မရပါဘူး။ အာကာသသွားတဲ့သူတွေက သူတို့ရဲ့ကျောကုန်းမှာ သူတို့လိုရာကိုသွားနိုင်ဖို့ Jet တတ်ထားရပြီး လောင်စာကုန်တာနဲ့ အာကာသထဲမှာ မျောနေဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။ ဂြိုလ်အပိုင်းအစတွေက Communication Satellite ကိုဖျက်ဆီးသွားလို့ သူတို့ရဲ့ဌာနချုပ်နဲ့ကလည်း အဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်သွားပါတယ်။ ဒီအပြင် အသက်ရှုဖို့ အောက်ဆီဂျင်ကလည်း အကန့်အသတ်နဲ့မို့လို့ သူတို့ နှစ်ယောက် လိုရာကို ဘယ်လိုရောက်အောင်သွားမလည်း၊ ရောက်ရော ရောက်ပါမလား၊ ဂြိုလ်ပတ်လမ်းထဲက အပိုင်းအစတွေကရော ကမ္ဘာကိုပတ်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လာ ဦးမှာလား၊ George Clooney နဲ့ Sandra Bullock တို့ ရဲ့စွန့်စားခန်းတွေကို ရင်သက်ရှုမောဖွယ် ကြည့်ရှုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသားနဲ့ မင်းသမီး နှစ်ဦးအဓိကသရုပ်ဆောင်ထားလို့ ဇာတ်လမ်းက ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်နေပါတယ်။ အာကာသထဲက စွန့်စားခန်းတွေကို ပီပီပြင်ပြင် ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားသလို သဘာဝကျကျ ရိုက်ကူးထားတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ မသွားနိုင်တဲ့ အာကာသကို ပိတ်ကား ထက်မှာ ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Drama ကားတစ်ကားအနေနဲ့ ဒီကားမှာ ပါတဲ့ Action က သာမန် Action ကား တွေလောက်နီးနီး ကောင်းပါတယ်။ Action, Suspense, Thriller တွေကြောင့် မိနစ်၉၀ လုံး မပျင်းမရိပဲ ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် နှစ်ဦးကြားက ဆက်ဆံရေး၊ စကားပြောခန်းတွေကလည်း ရုပ်ရှင်ကို ပိုမိုအသက်ဝင်စေပါတယ်။ (ဇာတ်ကားတစ်ကားလုံး Communication မရပဲ၊ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဟယ်လို ကြားလားနဲ့ တင် အချိန်ကုန်နေလို့ ဒီကားကိုကြည့်ရင်းနဲ့ မြန်မာပြည်ကိုတောင် ပြန်သတိရမိပါတယ်။)
ဒရမ်မာကား ကောင်းတစ်ကားဖြစ်သလို၊ ထူးခြားတဲ့ အာကာသကား ကောင်းတစ်ကားပါ။ အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ မရောက်ဖူးသေးလို့ ဒီကားကို 3D နဲ့ ကြည့်ရှုတာပိုကောင်းပါတယ်။ ကြည့်ဖြစ်အောင် 3D နဲ့ကြည့် ကြပါ။ ဒီကားက 3D အတွက်အဓိက ရိုက်ကူးထားပြီး၊ တတ်နိုင်ရင် Real 3D နဲ့ ကြည့်တာပိုကောင်းပါတယ်။ Digital 3D နဲ့တင် ပြီးပြည့်စုံနေပြီဖြစ်ပေမယ့် ပြည်ပရောက်နေတဲ့သူတွေ၊ Real 3D ရှိတဲ့ ရုံမှာသွားကြည့်ကြပါ။ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ပါ၊
3D နဲ့ကြည့်ပါခင်ဗျာ.။ ကြည့်သင့်ပါတယ်။ တန်ပါတယ်။
မိသားစုလည်း တူတူကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Rated ကတော့ PG-13 ပါ။ (No Sex, No Nudity, No Gory, No Blood, Not even Kiss nor romantic scene). မိသားစုတူတူကြည့်သင့်ပါတယ်။ ကလေးတွေ၊ လူငယ်တွေ ပါမကျန်၊ လူကြီးတွေလည်း ကြည့်သင့်တဲ့ကားတစ်ကားပါ။ မိဘတွေ သားသမီးတွေကို ရုံမှာ 3D နဲ့ ပြကိုပြသင့်တဲ့ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
အညွန်းကို #Sololay ရုပ်ရှင်မိတ်မှကူးယးဖော်ပြပါသည်..
Cloud ကနေ ဖိုင်ဆိုဒ်အသေး အကြီးနှစ်မျိုးနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
pCloud မှာတင်တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကို ဖုန်းနဲ့ တိုက်ရိုက်ကြည့်ဖို့
ဒေါင်းရတာအဆင်မပြေရင် ဒီမှာ ဖတ်ပါ
Download 985 MB
Download 370 MB
ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း January 17, 2015 at 7:42 AM
အခု လိုပြောတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ
Gods of Egypt (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
တောတွင်းသား (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
ထောင်ဖောက်ဇာတ်လမ်းတွဲ(အတွဲ ၁) ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
Bajirao Mastani (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Cabin Fever (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး ၁၈++
ထောင်ဖောက်ဇာတ်လမ်းတွဲ(အတွဲ ၂) ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
The Hills Have Eyes II (2007)မြန်မာစာတန်းထိုး
Mojin-The Lost Legend(2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
FB မှာသိရအောင် LIKE လေးနှိပ်ခဲ့ပါ
ချမ်းငြိမ်း - မှော်ဝန်း
ARROW Season 1 complete
ARROW Season2complete
ARROW Season3complete
Backup Restore လုပ်နည်း
Prison Break Season
Prison Break Season 1 complete
Prison Break Season2complete
Prison Break Season3complete
Prison Break Season4complete
Prison Break The Final Break မြန်မာစာတန်းထိုး
Spartacus season 1
Supernatural Season 1 complete
Supernatural Season 10 complete
Supernatural Season2complete
Supernatural Season3complete
Supernatural Season4complete
Supernatural Season5complete
Supernatural Season6complete
Supernatural Season7complete
Supernatural Season 8 complete
Supernatural Season9complete
Supernatural အတွဲ ( ၁၀ ) အပိုင်း ( ၆ )မြန်မာစာတန်း...
Supernatural အတွဲ ( ၁၀ ) အပိုင်း ( ၅ )မြန်မာစာတန်း...
Taken2(2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
Taken (I) (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၁၀ ) အပိုင်း ( ၄ )မြန်မာစာတန်း...
Supernatural အတွဲ ( ၁၀ ) အပိုင်း ( ၃ )မြန်မာစာတန်း...
Lan Kwai Fong3( 2014 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
Lan Kwai Fong2( 2012 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
Lan Kwai Fong ( 2011 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၁၀ ) အပိုင်း ( ၂ )မြန်မာစာတန်း...
Supernatural အတွဲ ( ၁၀ ) အပိုင်း ( ၁ )မြန်မာစာတန်း...
Seven Psychopaths ( 2012 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
Vice ( 2015 )
Takedown (2000) မြန်မာစာတန်းထိုး
Dhoom-3 ( မြန်မာစာတန်းထိုး)
Epic (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Doomsday (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Book of Life အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုး (816 MB)
Supernatural အတွဲ ( ၉ ) အပိုင်း ( ၂၃ )မြန်မာစာတန်း...
Supernatural အတွဲ ( ၉ ) အပိုင်း ( ၂၂ )မြန်မာစာတန်း...
မိုက်ခရိုဆော့ Office ProPlus 2013 SP1 VL (x64/x86)...
Windows 8.1 and All in 1 Activator
၀င်းဒိုး - 8.1 Professional VL (x86/x64) EN-US Nov...
Supernatural အတွဲ ( ၉ ) အပိုင်း ( ၂၁ )မြန်မာစာတန်း...
Supernatural အတွဲ ( ၉ ) အပိုင်း ( ၂၀ )မြန်မာစာတန်း...
Supernatural အတွဲ ( ၉ ) အပိုင်း ( ၁၉ )မြန်မာစာတန်း...
Broken City (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Internet Download Manager 6.21build 18
Hachiko A Dog's Story (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၉ ) အပိုင်း ( ၁၈ )မြန်မာစာတန်း...
Supernatural အတွဲ ( ၉ ) အပိုင်း ( ၁၇ )မြန်မာစာတန်း...
Justice.League.Throne of Atlantis (2015)
The Matrix Revolutions (2003) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Matrix Reloaded (2003) မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၉ ) အပိုင်း ( ၁၆ )မြန်မာစာတန်း...
Supernatural အတွဲ ( ၉ ) အပိုင်း ( ၁၅ )မြန်မာစာတန်း...
The Matrix (1999) မြန်မာစာတန်းထိုး
Sunshine (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၉ ) အပိုင်း ( ၁၄ )မြန်မာစာတန်း...
Supernatural အတွဲ ( ၉ ) အပိုင်း ( ၁၃)
Guardians of the Galaxy (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၉ ) အပိုင်း ( ၁၂ )မြန်မာစာတန်း...
Supernatural အတွဲ ( ၉ ) အပိုင်း ( ၁၁ )မြန်မာစာတန်း...
Spider-Man Unlimited v1.2 Game apk
Commitment (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Life ofaKing (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၉ ) အပိုင်း ( ၁၀ )မြန်မာစာတန်း...
Supernatural အတွဲ ( ၉ ) အပိုင်း ( ၉ ) မြန်မာစာတန်း...
Pathfinder (2007) (1.61GB) (HD)
Hachi: A Dog's Tale (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014) 7...
Supernatural အတွဲ ( ၉ ) အပိုင်း ( ၈ )
Supernatural အတွဲ ( ၉ ) အပိုင်း ( ၇ )မြန်မာစာတန်းထ...
ဖုန်းမှာ Virus တွေကို ကာကွယ်သတ်ပေးမယ့်-Mobile Secu...
Night at the Museum- Secret of the Tomb (2014)
Supernatural အတွဲ ( ၉ ) အပိုင်း ( ၆ )မြန်မာစာတန်းထ...
Supernatural အတွဲ ( ၉ ) အပိုင်း ( ၅ )မြန်မာစာတန်းထ...
Chariot ( 2013 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၉ ) အပိုင်း ( ၄ )မြန်မာစာတန်းထ...
Supernatural အတွဲ ( ၉ ) အပိုင်း ( ၃ )မြန်မာစာတန်းထ...
Hours ( 2013 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၉ ) အပိုင်း ( ၂ )မြန်မာစာတန်းထ...
Supernatural အတွဲ ( ၉ ) အပိုင်း ( ၁ )မြန်မာစာတန်းထ...
The Social Network (2010) မြန်မာစာတန်းထိုး
windows 7- 8 - 8.1 နှင့် မြန်မာဖောင့်
100 Keyboard Shortcuts For All Windows Functions
IDM Fake Serial Number Error လွယ်လွယ်ဖြေရှင်းမယ်.....
Windows7Manager Version 5.0.4 with Crack Full ve...
Supernatural အတွဲ ( ၈ ) အပိုင်း ( ၂၃ )မြန်မာစာတန်း...
Pacific Rim (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၈ ) အပိုင်း ( ၂၂ )မြန်မာစာတန်း...
Supernatural အတွဲ ( ၈ ) အပိုင်း ( ၂၁ )မြန်မာစာတန်း...
Internet Download Manager 6.21build 17
Gallery Vault-Hide Video&Photo v1.11.3
Advanced Download Manager Pro v4.0.3
facebook သုံးတဲ့သူများအတွက် updater Version-Facebo...
Kung Fu Jungle (2014)မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၈ ) အပိုင်း ( ၂၀ )မြန်မာစာတန်း...
Supernatural အတွဲ ( ၈ ) အပိုင်း ( ၁၉ )မြန်မာစာတန်း...
ဗွီဒီယို စာတန်းထိုးကို အထူးဝါသနာပါသူတို့အတွက် ဖုန်...
22 Jump Street (2014)မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၈ ) အပိုင်း ( ၁၈ )မြန်မာစာတန်း...
Supernatural အတွဲ ( ၈ ) အပိုင်း ( ၁၇ )မြန်မာစာတန်း...
G.I. Joe: Retaliation (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Scorpion King 4: Quest for Power (2015)
10,000 BC (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၈ ) အပိုင်း ( ၁၆ )မြန်မာစာတန်း...
Supernatural အတွဲ ( ၈ ) အပိုင်း ( ၁၅ )မြန်မာစာတန်း...
Bbuddah Hoga Terra Baap (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၈ ) အပိုင်း ( ၁၄ )မြန်မာစာတန်း...
Copyright © ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း | Powered by Blogger